HomeWararka MaantaKa Dib 12 Sano Shilpa Shetty Oo Ku Soo Laabaneysa Aflaanta, Yay La Soo Muuqaneysaa? Shilpa Shetty
Quruxleydii hore ee Bollywoodka Shilpa Shetty ayaa la sheegay ine ay dib ugu soo noqoneyso shaashadaha kana soo muuqan doonto Film aan magac wali loo bixinin balse shactiro ah.
Shilpa Shetty waxa ay kamid tahay atiriishooyinka loogu jeclaa Bollywoodka , tan iyo sanadkii 2007-dii kama soo muuqan Bollywoodka .
Shilpa Shetty waxay ay sanadkaas ka soo muuqatay Filmkii guusha wacan gaaray ee Apne kaasoo reer Deol la isugu keenay sida Dharmendra, Suuny Deol & Bobby Deol kadib xiddigtaan nolosheeda gaarka ah ayee isaga mashquushay Bollywoodkana wey isaga tagtay.
Shilpa waxay noqotay macalimad Gym-ka iyo Yoga dadka ka caawisa in ay jimicsi wacan sameeyaan in badan ayayna sanadahaan dambe baraha bulshada soo dhigeysau muuqaalo Yoga ay sameeyneyso oo qeyb kamid ah cibaadadeeda ay ka dhigatay.
Haddaba waxaa la sheegay in filmkaan cusub ee shactirada ah la jili doonaan Diljit Dosanj, Yami Gautam iyo kuwa kale waxayna Shilpa ku jili doontaa qof qoraa ah dhamaadka sanadkaan ama bilawga 2020 ayaa la daawan doonaa….